အလောင်းတော် ငါးမင်းဖြစ်စဉ်က ဓားနှင့်မွှန်းသောနေရာအနီး တောင်ငယ်ကို ဓားမွှန်းတောင်ဟု ယခုတိုင် တွင်ပါသည်။ (မန္တလေးတိုင်း၊ မတ္တရာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။) ငါးမင်းခုန်ချခဲ့သော တောင်ကမူကို ငါးခုန်ချမှ ယခုအခါ ဝသုန္ဒရဟု အမည်တွင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ဆားများခါချသော တောင်ကို ဆားခါတောင်အဖြစ် ယနေ့တိုင် တည်ရှိပါသည်။ (ကောင်းမွန်ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။)
↑ ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ) (၁၉၉၀-ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ). "မြန်မာမင်းလက်ထက် အသုံးစာရင်း". မန္တလေးမဂ္ဂဇင်း.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရန်ကင်းတောင်&oldid=399622" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၀:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။